'दलाल पुँजीवाद’ कहाँ पुग्यो ?- विचार - कान्तिपुर समाचार
'दलाल पुँजीवाद’ कहाँ पुग्यो ?
चैत्र २६, २०७५ विष्णु सापकोटा
काठमाडौँ — स्पेनिस भाषाको ‘कम्प्राडोर’बाट अन्य भाषा हुँदै नेपालीमा अनुदित भएकाले पनि हुनसक्छ, राजनीतिमा युवा अवस्थामै समाहित हुनेमध्ये धेरै नेपालीले पहिले ‘दलाल पुँजीवाद’को विरोध गर्न सिके । धेरैपछि मात्र यसको केही अर्थ बुझ्न थालेका हुन् । दलाल पुँजीवादको विरोध गरेरै राजनीति थालेकाहरूको अहिलेको सन्दर्भमा दलाल पुँजीवादसँगकै नाता–सम्बन्ध देख्दा उक्त अवधारणाको मर्म सम्बन्धित पात्रहरूले अहिले राम्रैसँग बुझेको प्रतीत हुन्छ ।
हुन त ‘गोर्खा भर्ती बन्द’ गर्नुपर्ने कुरा, ‘भारतसँगका असमान सन्धि खारेज’ गरिनुपर्ने कुरा अहिले कहाँ पुगेका छन् भनी तिनको हालको ठेगाना पत्ता लगाइयो भने दलाल पुँजीवाद पनि त्यतै कतै भेटिन सक्छ ।
निकट इतिहासका आन्दोलनका मूल अवधारणा अहिले ‘राजनीतिक क्रान्ति पूरा भएको’ अवस्थामा आइपुग्दा कता के गरेर दिन बिताइरहेका होलान् भन्ने विषय अहिले राज्यको चरित्रसँग सोझै जोडिएको छ । सर्वोच्चमा फलानोको सट्टा किन फलानो न्यायाधीशमा सिफारिस भयो ? फलानोको सट्टा किन फलानो राजदूतमा नियुक्त भयो ? जस्ता खुद्रा प्रश्नको जवाफ खोज्नुभन्दा सोझै दलाल पुँजीवादको अहिलेको ठेगाना खोज्यो भने धेरै प्रश्नको उत्तर त्यतै मिल्न सक्छ ।
जब राजनीतिकै दलालीकरण भएको छ भने दलाल पुँजीवादको अहिलेको बास तिनै दलमा छ, जसले यसको विरोध गरेर राजनीतिक आन्दोलन गरेका थिए । अहिले कुनै कुरा यस्तो भएको छ भन्नुभन्दा त्यो कुरा किन त्यस्तो भयो वा त्यस्तो किन हुन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यसको उत्तर भने त्यति सजिलो छैन ।
सन् २००२ को अर्थशास्त्रका नोबेल विजेता ड्यानियल काह्नेम्यानको केही वर्षअघि प्रकाशित ‘थिङकिङ, फास्ट एन्ड स्लो’ पुस्तक पछिल्लो समयको चर्चित मध्येको हो । उक्त पुस्तकमा मान्छेको कुनै पनि कुरा सोच्ने र निर्णयमा पुग्ने प्रक्रियाबारे रोचक व्याख्या छ । उनको एउटा प्रमुख सार के छ भने– हामीले आजभन्दा वर्षौं अघिको कुनै घटनाबारे अहिले पनि सजीव रूपमा सम्झिरहेका हुन सक्छौं । जे कुरालाई हामीले प्रस्ट सम्झेको ठानिरहेका छौं, वास्तवमा त्यतिखेर भएको कुरा र अहिले सम्झेको कुरा निकै फरक हुनसक्छ ।
एउटा घटना भएको ५ वर्षपछि कुरा गर्दा त्यसबारे एउटा चित्र हुन्छ, हाम्रो दिमागमा । हामीले लगातार त्यो चित्र पछिल्लो मनस्थिति अनुसार फेर्दै जान्छौं । हाम्रो मनलाई लाग्छ, खासमा भएको त्यही नै थियो, जुन अहिले हामीले सम्झेका छौं । तर खासमा त्यो घटना अर्कै प्रकृतिको हुनसक्छ, जतिबेला त्यो भएको थियो । हाम्रो सोचाइ र वास्तविकतामा फरक किन पर्न सक्छ भने हाम्रो दिमागमा मूलतः दुइटा प्रणालीले काम गरिरहेका हुन्छन् ।
पहिलो प्रणालीले कुनै कुरा जस्तो छ, त्यही ‘इम्प्रेसन’ दोस्रो प्रणालीमा पुर्‍याउँछ । दोस्रो प्रणालीले सामान्य अवस्थामा जस्तो ‘इन्पुट’ पायो, त्यसकै आधारमा अन्तिम धारणा बनाउँछ । व्यावहारिक आवश्यकताका आधारमा दोस्रो प्रणालीले पहिलो प्रणालीले दिएको ‘इन्पुट’ वा ‘इम्प्रेसन’लाई आफ्नो सुविधा अनुकूल व्याख्या गर्छ । र भन्ठान्छ, भएको यस्तो हो ।
उदाहरणका लागि कुनै काम विशेषका लागि एकजना नयाँ मानिससँग भेट भयो । त्यो मान्छे असल लाग्यो कि खराब भनी पहिलो प्रणालीले एउटा ‘इम्प्रेसन’ पठाउँछ, दोस्रो प्रणालीलाई । दोस्रोले आवश्यकता अनुसार निर्णय गर्न सक्छ, त्यो ‘इम्प्रेसन’को आधारमा । आफूले मानेको मान्छेले गरेको कुनै नराम्रो कुरा राम्रो लाग्न सक्छ । आफूले हेपेको मान्छेले गरेको कुनै राम्रै कुरा पनि दोस्रो प्रणालीले नराम्रो भनेर विश्लेषण गरिदिन सक्छ । अर्थात् जेलाई हामीले प्रस्ट रूपमा आफ्नै अनुभव वा स्मृति भन्छौं, ती लगातार बन्दै–भत्कने कुरा हुन् ।
काह्नेम्यानको प्रसंग ल्याउनुको कारण दलाल पुँजीवाद अहिले कहाँ पुगेको छ भनी जाँच्न हो । दलाल पुँजीवादको विरोध गर्दै राजनीति थालेकाहरूमध्ये धेरै अहिले आफै त्यही दलालीमा फँसेको कुरा उनीहरूलाई बाहिरबाट हेर्नेले प्रस्ट देख्छन् । तर उनीहरू स्वयम् त्यो सपाट तथ्यलाई देख्दैनन् । किन देख्दैनन् त ? किनकि मान्छेले जे कुरालाई तथ्य ठान्छ, त्यसले आफूले आफैलाई व्याख्या गर्दैन । व्याख्या अरुले गर्ने हो । तसर्थ उनीहरूलाई अहिले दलाली, दलालीजस्तै लाग्दैन । र यो कुरा कुनै व्यंग्यभावमा भनिएको होइन । यो समाज विज्ञान र मनोविज्ञानका सिद्धान्तमा स्थापित कुरा हो ।
त्यतिखेर पनि वस्तुगत यथार्थ अहिलेकै जस्तै थियो होला । उदाहरणका लागि गोर्खा भर्ती बन्द हुनुपर्ने कुरा होस् वा भारतसँगको असमान सन्धि खारेज गर्ने मुद्दाको लागि आफू जेल जान तयार रहेको कुरा नै किन नहोस् । त्यो यथार्थ त्यही नै छ । तर आफ्नो दिमागको पहिलो प्रणालीले पठाएको ‘इन्पुट’लाई अब दोस्रो प्रणालीले अहिलेको मनस्थिति अनुसार छुट्टै व्याख्या गर्छ । अब त्यो विषयका लागि संघर्ष गर्नुपर्ने जस्तो लाग्दैन । अब लाग्न सक्छ, ठूलो देशले सानोलाई हेपिहाल्छ नि, यो नै यथार्थ हो । नेपाल आफू धनी भयो भने यस्ता कुरा आफै हट्छन् भन्ने व्याख्यातिर अहिलेको दोस्रो प्रणाली लाग्छ ।
दलाल पुँजीवाद भनेको के हो वा के थियो भने– स्थानीय वा स्वदेशी व्यक्ति र व्यापारीहरू आफैले केही उत्पादनशील वा सिर्जनशील कार्य नगरी केवल विदेशका ठूला पुँजीपतिका स्थानीय एजेन्ट भएर काम गर्ने अवस्था । औपनिवेशिक समयमा विदेशी शक्तिलाई काम गर्न सजिलो हुन्थ्यो, स्थानीय दलाललाई हातमा लिएर । त्यस्ता स्थानीय दलाल जो आफै पुँजीवादी नभएर केवल विदेशी पुँजीपतिका दलाल हुन्थे र तिनको बफादारी पनि देशभित्र नभएर बाहिरकासँग हुने नै भयो ।
आफैले उद्योग र उत्पादन नगरेपछि देशको कच्चा पदार्थ बाहिर जाने नै भयो । रोजगारीको सिर्जना पनि नहुने भयो । त्यस्तो स्थितिले गर्दा देशभिक्रका ती सीमित व्यत्ति धनी भए । देशले उँभो लाग्न पाउने भएन भन्ने कुरा दलाल पुँजीवादको अन्त्य गरिनुपर्छ भन्ने तर्कभित्र पर्छ जो स्वतः राम्रो कुरा भइहाल्यो ।
आजको नेपालमा जहाँ लोकतान्क्रिक त्रान्ति पूरा भएको र वाम क्रान्ति बिसाइएको वा लोकतन्त्रमै मिसाइएको अवस्था छ । यो दलाल पुँजीवादको अन्त्यतर्फ लागेको छ त ? व्यापार घाटाका आँकडा सुन्दा त्यो हरेक वर्ष झन् विकराल बन्दै गएको सबैले पढेकै छौं । देशभित्र स्वदेशी उद्योग कलकारखाना आफै कति बढ्दै गएका छन्, त्यो पनि झन् निराशाजनक रहेको जगजाहेर छ । हुँदा–हुँदा तिनै विदेशका ठूला पुँजीपतिहरू नेपाल आइदिएर यहाँ लगानी गरिदिए हुन्थ्यो भनी बिन्तीभाउ गर्दा पनि कति आउलान्–नआउलान्, त्यसै आस गरेर बस्नुपरेको छ ।
तसर्थ यो सबै पृष्ठभूमि र अहिलेको अवस्था बीचको मूल प्रश्न के हो भने आखिर को थिए त विगतका दशकहरूमा नेपालका ती सबै पुँजीवादका दलालहरू ? र अहिलेको नेपालमा ती दलाल पुँजीवादीहरू कहाँ कोसँग के गर्दैछन् ? आजकलको नेपालमा ‘दलाल पुँजीवाद मुर्दावाद’ भन्ने नारा धेरै लाग्दैनन् । त्यसको अर्थ अब यहाँ ‘दलाल पुँजीवाद’ सकिएर पुरै स्वदेशी उत्पादनशील पुँजीवादी वर्गको स्थापना भएको हो कि त्यो पुरानो दलाल पुँजीवादले केवल ठेगाना बदलेको हो ?
मानिसको स्मृतिले कसरी काम गर्छ र एकै प्रकारका ‘डाटा’लाई परिस्थिति अनुसार उसले कसरी फरक व्याख्या गर्छ भन्ने समाज विज्ञानको सिद्धान्तको आलोकमा हेर्दा तिनै व्यक्ति जो ‘अरु’सँग हुँदा दलाल थिए, तिनै अहिले देशले खोजेजस्ता पुँजीवादी भएका छन् । किनकि ती अब आफ्ना भए । ‘आफ्नो’ पनि कहिल्यै नराम्रो हुनसक्छ र ?
समानुपातिक कोटामा आजकल सांसद को हुन्छन् ? चुनावताका ‘टिकट’ प्राप्त गर्न सक्षम कसलाई ठानिन्छ ? देशभरिका नाफामूलक निजी विद्यालय, कलेज, अस्पताल आदिमा देखिने र नदेखिने दुबै खालको हिस्सेदारी सबैभन्दा बढी राजनीतिक दलका नेताको नभए कसको छ ? नाम चलेका व्यापारिक ‘नेटवर्क’, नयाँ खुल्ने होटल र रिसोर्टमा नदेखिने ‘सेयर’ लगानी अहिले राजनीतिक वर्ग बाहेक कसको बढी छ ? अहिलेका सत्ताधारी हुन् कि विपक्षी प्रायःजसो ‘प्रभावशाली’ नेताका सबैभन्दा आफ्ना मान्छे दलाल पुँजीपति नभए अरु को छन् ? अनि ती जो पहिले अरु थिए, अब अहिले आफै भइसके भने ‘दलाल पुँजीवादी’ भनेर पहिले के बुझिएको थियो र अहिले कसलाई बुझ्ने ?
यसलाई अब यसरी बिट मारौं । नेपालमा जे भएको छ, त्यो संसारमा पहिलोपटक भएको होइन । राजनीतिक संघर्षकालका वैचारिक दृष्टिकोण र शब्दका परिभाषा संघर्षका पात्रहरू सत्तामा गएपछि संसारमा धेरैतिर फेरिएका छन् । सिद्धान्तका रंगहरू बदलिएका छन् । बदलिइरहनेछन् । लोकतन्त्रका लागि लडेका, जेलदेखि यातना सहेका पात्रहरू सत्तामा पुगेपछि सबैले राम्रो गरेका भए हामी बाँचेको संसार अहिलेभन्दा अर्कै हुने थियो । त्यसैले लोकतन्त्रलाई एउटा प्रक्रिया भनिएको हो ।
लोकतन्त्रमा आलोचनात्मक चेत हरदम रहिरहनुपर्छ । लोकतन्त्र भनेको केवल दलहरूमात्र होइनन् । केवल पाँच वर्षको एउटा निर्वाचनमात्र होइन । प्रत्येक दिनको नागरिकको निगरानी र आलोचनात्मक चेतले सुधार्दै लग्ने प्रणाली हो । र नागरिक समाजकै काम पनि राजनीतिक अधिकारका मुद्दामा सडकमा आउने मात्र नभई दैनन्दिन हिसाबमै जनताका सवालका लागि ‘दलाल पुँजीवादी’माथि पहरेदारी गर्ने हो ।
प्रकाशित : चैत्र २६, २०७५ ०७:३२
भुमरी पनि अवसर
चैत्र २६, २०७५ राजेन्द्र महर्जन
काठमाडौँ — ‘सबै जनताले खाना खाए–नखाएको बुझ्न लगाउने र खाएको खबर दरबारमा नपुगेसम्म आफै पनि खाना नखाने’ किराती राजा बलिहाङको कथा फेटा चक्रवातबाट पीडित अस्सी वर्षका नथुनी मुखियाले कहिल्यै नसुनेको हुनसक्छ । ‘प्रजाको धुरीबाट धुवाँ ननिस्कुन्जेल भोजन नगर्ने’ मल्ल राजा महेन्द्र मल्लको इतिहास भुमरीबाट थिलथिलो भएकी देवी पटेलले पढिनन् पनि होला ।
उनीहरूले चक्रवातग्रस्त फेटा गाउँपालिकाका भोका जनतालाई हेलिकप्टरबाट नजर गर्ने र ‘अब आफ्नो शासनमा कोही भोका हुने छैनन्’ भन्ने नयाँ राजाका चुटकिला भने पक्कै सुनेको हुनुपर्छ ।
‘प्रजाले दूधभात पनि खान पाएका छैनन् र ?’ भनी सोध्ने ‘राष्ट्रपिता’ त्रिभुवन शाहको कहानी हुन्डरीबाट आक्रान्त भलुहीका राजेश दासलाई थाहा नहुन सक्छ । तिनै त्रिभुवन शाह, उनका छोरादेखि नाति राजाहरू फटाएका फेटाबासीहरूले चक्रवातग्रस्त क्षेत्रमै ‘नयाँ राजाहरू’ भने देख्ने मौका पाएका छन् । हो, त्यस्ता नयाँ शासकहरू भोग्न पाएका छन्, जो पीडितजनलाई दर्शन दिन र आश्वासनको कोसेली बाँड्न चक्रवातग्रस्त क्षेत्रमा राजकीय सवारी चलाउँछन् । त्यस्ता नेता, मन्त्री र प्रशासकहरूको दर्शन पनि पाएका छन्, जो भुमरी पीडित प्रजाका रुग्ण हातसँगै चामलको बोरा र चाउचाउको प्याकेट समाउँदै, आश्वासनको पोको बाँड्दै रंगीन तस्बिर खिच्नमा बेसी रुचि राख्छन् । पत्रकार अक्षर काकाको रिपोर्ट अनुसार रित्तो हात आउने र अनावश्यक सामग्री ल्याउनेहरू देखेर आफन्तजनसँगै सर्वस्व गुमाएकी मोहनदेवी दास भन्छिन्, ‘आश्वासनले मात्रै आँसु नथामिँदो रहेछ ।’
पत्रकार सुविना श्रेष्ठको रिपोर्टिङ अनुसार आफ्नो घर र सपनाको भग्नावशेषमाथि टुक्रुक्क बसिरहेकी देवी पटेलको ठूलो गुनासो छ, ‘ठूलठूला नेताजी र सरकारी बाबुहरू आउँछन्, ठूलठूला आश्वासन बाँड्छन् । तर हामीलाई तुरुन्तै चाहिएको ओतको व्यवस्थासमेत गर्दैनन् ।’
मेला होइन, चक्रवातको ताण्डव
‘न चुनाव छ, न गढीमाईको मेला, तैपनि भिड लागेको छ,’ वृद्ध नथुनी मुखियाको अनुभूति उतारेका स्तम्भकार चन्द्रकिशोर परोपकारीका व्यवहारबारे खरो भाषामा लेख्छन्, ‘कतिपयले प्रकोपलाई तमासाका रूपमा लिएका छन्, पीडितहरूले पनि हेर्न आउनेको घुइँचोलाई तमासाकै रूपमा लिएका छन् । यसभित्र करुणा र संवेदनशीलता कम छ । ठूला कदका नेता र उच्च पदाधिकारीको ओहोर–दोहोरले सुरक्षा निकायको श्रम र समय त्यसैमा खर्चिइरहेको छ । शीर्ष नेतासँगै गाडीको ठूलो लाम लाग्छ । हेर्न आउनेको भिड र गाडीको लाम राहत वितरणमा तगारो बनिरहेका छन् ।’
फेटाका कच्ची सडकमा धुलो उडाउँदै आउने गाडीको ताँतीसँगै नेता र सरकारी अधिकारीहरूको लर्को रोकिएको छैन । त्यस्तै मृतकका परिवारजनका शोक र पीडाको भुमरी पनि थामिएको छैन, जतिसुकै ठूलठूला आश्वासन बाँडिए पनि । किरिया गर्न, खानपिन गर्न, घामपानी र हुरी–बतासबाट बच्न चाहिने स्रोतसाधनको अभावमा त्रास र निराश जीवन बाँचिरहेका फेटाबासीका लागि आश्वासनको पोको होइन, ठोस र मूर्त राहतको प्याकेजको जरुरी हो । जेजति सामग्री पुगेका छन्, जेजस्तो सहयोग पुगेको छ, तिनको अपुगपना र अव्यवस्थाबारे जनगुनासोलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन ।
‘कसैले पनि हाम्रो पीडा र शोकलाई बुझेन । सिंगो गाउँ शोकमा डुबेको छ, तर अरुका लागि मेला लागेको छ’, आफ्नो असहायपनको फोटो खिच्नेहरू देखेर वाक्कदिक्क भएकी देवी पटेलहरूको दुःखेसो कम भएको छैन । सुविना श्रेष्ठका शब्दमा, आफन्तजन र श्रीसम्पत्ति गुमाएर आहत भएका फेटाबासीहरू अरुका लागि चिडियाघरमा राखिएका दुर्लभ प्राणीजस्तै सावित भएका छन् । जो आए पनि उनीहरूको तस्बिर र सेल्फी खिचिन्छ, उनीहरूको आत्मसम्मानमा लाग्ने ठेसलाई हेक्का राख्दैनन् । नेता, प्रशासन र गैससबाट लथालिंग पारामा लापरबाहीपूर्वक जारी राखिएको राहत वितरणलाई ‘पब्लिसिटी स्टन्ट’को रूपमा गाउँलेहरूबाट सार्वजनिक रूपमा भइरहेको निन्दालाई कसले वास्ता गर्ने होला ?
प्राकृतिक प्रकोपको उपयोग
भुमरीबाट थिलथिलो पारिएका फेटाबासीका शोक र पीडालाई समेत प्रचारबाजीको आदिम तमासा बनाउनेहरूका लागि प्रत्येक प्राकृतिक–अप्राकृतिक प्रकोप ‘महान अवसर’ हो । २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पलाई समेत विभेदकारी संविधान निर्माणको सुनौलो मौकामा बदल्न सक्ने महान प्रचारकहरूलाई थाहा छ, फेटा झन्झावातलाई पनि मज्जाले उपयोग गर्न सकिन्छ !
कुनै समन्वय र योजनाविना आआफ्नै सर्तमा जथाभावी राहत वितरण गर्ने जिद्दी, राहत वितरणमा सशरीर संलग्न हुनुपर्ने हठ,आफ्नो संलग्नतालाई सार्वजनिक गर्नुपर्ने मोहले ‘पर–उपकार’ र त्यसको नाममा जारी उपयोगको नीति र नियतलाई उजागर गरेको छ ।
चुस्त उद्धार र तत्काल राहतसँगै व्यवस्थित पुनर्वासको अगुवाइ गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली शर्माले रित्तो हात हेलिकप्टरबाट निरीक्षण गर्दै मधेस विरोधी छाप मेट्न हतारिएको धेरैलाई थाहा छ, पूर्वनिर्धारित भ्रमण रद्द गर्दै भुमरीग्रस्त क्षेत्रमा यात्रा गरेको प्रचार गर्दै ।
चाहे नेकपा डबलका नेता माधवकुमार नेपाल हुन् या नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा वा अन्य दलका नेता, सबैले लाख–लाख रुपैयाँको कोसेली र सरकारले बर्खाअघि घर बनाउने आश्वासन दिएका छन्, जसको नेपथ्यमा मधेसी भावना आफ्नो पक्षमा तान्ने रणनीति लिएको तथ्यबाट कोही बेखबर छैन । यो सब लोकरिझ्याइँ वा लोकप्रियतावाद (पपुलिजम) का अनेक अवतारीको गरिखाने मेलोमेसो हो, जसले कसैको आपत्–विपत्मा संस्थागत लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्दै लोकलाई लोभ्याउने राजनीति गर्छ ।
भुमरी पीडितको उद्धार, राहत र पुनर्वासका लागि संस्थागत लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र संरचना के हो ? त्यस संरचना र प्रक्रियामा लोकको सहभागिता कसरी हुन्छ ? त्यसक्रममा उनीहरू आफ्नो भाग्य निर्माणका लागि कसरी सशक्त, सम्मानित र हस्तक्षेपकारी हुन्छन् ? कुनै दल वा नेता वा सरकारले सम्यक विचार पोखेको र सही बाटो व्यवहार देखाएको थाहा छैन ।
सबैजसो नेता संस्था र प्रक्रियालाई भन्दा व्यक्तिलाई विधाता वा नायक बनाउने धुर्मुसपथमा अग्रसर हुँदा आखिरमा कमजोर हुने त लोक र लोकका लागि अत्यावश्यक संस्थागत लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र संरचना नै हुन् । उदाहरणका लागि, चुनावको मुखमा हातले गुहुमुत सोहर्ने सफाइ कर्मचारीका गोडा धुँदै हिँडेका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको लोकरिझ्याइँसामु तिनै दलितजनसँगै लोकतन्त्र र संस्थागत प्रक्रियाको देहान्त हुँदैछ ।
हातले गुहुमुत सोहर्ने घृणित व्यवस्थालाई समाप्त पार्ने र सफाइ कामदार दलितले पनि सवर्णसरह सम्मानित जीवन बाँच्न सक्ने वातावरण बनाउने संस्थागत प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्दै लोकलाई लोभ्याउने मोदीपथ नेपाली नेताहरूको पनि विचार र मार्ग भएको छ ।
परोपकारी अवतारमा प्रचण्ड
यस अर्थमा सत्तासीन पार्टी नेकपा डबलका को–पाइलट पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उद्योगमन्त्री मातृका यादव र प्रभु साहजस्ता मधेसी नेतासँगै चामलको बोरा समात्दै गरेको दृश्यमा खासै टिठलाग्दोपना देखिँदैन ।
मृतकलाई ३ लाख बाँड्ने वचन दिने क्रममा आफ्नै खल्तीबाट पैसा बाँड्न खोजेको आभाष दिलाउने भाषा प्रयोग गरेका प्रचण्डले फेटामा भुमरी पीडितलाई राहत बाँड्ने क्रममा समातेको चामलको बोरा र समात्ने हातले खासमा परोपकारवाद र लोकप्रियतावादतिर संकेत गरेका छन् । सबै गरिब जनता, त्यसमा पनि महिला, मधेसी, दलित, जनजातिको मुक्तिको सपना बाँडेर जनयुद्धको अगुवाइ गरेका प्रचण्ड पनि अब मुक्तिकामीको रूपमा होइन, परोपकारी अवतारमा अवतरण गरेका छन् ।
चुनावका बेला हजार–हजारको नोट र सारी बाँड्ने पुराना नेताहरूकै शैलीमा मधेसका पनि अति विपन्न र अधिकांश दलितलाई चामल बाँड्ने परोपकारिताले धेरै गरे प्रचण्डलाई पनि ‘खान पुगोस्, दिन पुगोस्’ भन्ने विवेकशील साझा पार्टीका संयोजक रवीन्द्र मिश्रको परोपकारवादसम्म मात्रै पुर्‍याउने हो । यस्तो परोपकारवादले कोही माग्ने, कोही दिने असमान सामाजिक संरचनालाई नै भरथेग गर्छ, कोही संरक्षक त कोही संरक्षितको सम्बन्ध (प्याट्रोन क्लाइन्ट रिलेसनसिप वा विष्ट–अछूत सम्बन्ध) लाई नै पोस्छ ।
लोकतान्त्रिक राजनीतिभन्दा वंशानुगत र लोकप्रियतावादी राजनीति गर्नेहरूका लागि एउटा सजिलो माध्यम हो– परोपकारवाद । अंग्रेजीमा झन्डै–झन्डै झुक्किने खालका दुई शब्द छन्– ‘ह्युमनिस्ट’ (मानववादी) र ‘ह्युमनिटेरियन’ (परोपकारवादी) । चिन्तक पाउलो फ्रेरेका अनुसार मानववादले उत्पीडनको संसारलाई अनावृत्त गर्दै सामूहिक आचरणद्वारा त्यसको रूपान्तरणमाथि जोड दिन्छ, अनि उत्पीडितमात्रै होइन, उत्फीडकलाई मुक्त गर्ने स्थायी मुत्तिको प्रक्रियाअंँगाल्छ । परोपकारवादले चाहिँ उत्पीडकहरूका अहंवादी हितहरूबाट थालनी गर्छ, जुन अहंवाद आफू पितातुल्य भएको मिथ्या उदारवादको खास्टोले छोपिएको हुन्छ ।
यसले उत्पीडितहरूलाई परोपकार गरिने ‘वस्तु’ बनाइदिन्छ, अनि उत्पीडनकारी संरचना, सम्बन्ध र संस्कृतिलाई कायम राख्छ । यसले पीडितहरूलाई उत्पीडितहरूलाई जहिले पनि कुवामा खसेको निरूपाय मान्छे वा आगलागीमा परेको असहाय व्यक्तिको रूपमा बुझ्छ । र उनीहरूलाई उद्धार गर्न कोही न कोही चामत्कारिक नेता वा उदात्त तानाशाह वा एलिट क्लास (अभिजात वर्ग) को बौद्धिक अगुवाको अवतरण जरुरी हुन्छ । यसरी ‘यदा यदा हि धर्मस्य’को गीता–शैलीमा भगवान्को एक रूप प्रकट हुन्छ ।
फेटाबासीले गरिब र दलितसँगै उत्पीडितलाई बेसी सिकार गर्ने प्रकोपको दुष्प्रभावबाट मुक्त हुन कुनै अवतारको आस गरिरहेका छैनन् । बरु अनेक पीडा र अव्यवस्थासँग संघर्ष गर्दै सोधिरहेका छन्– हाम्रा दुःखसुखमा सहकार्य गर्ने र हाम्रा विपत्‌काे दुरुपयोग नगर्ने कुनै दल, कुनै नेता–कार्यकर्ता, कुनै जनआन्दोलन छन् कि छैनन् ?
प्रकाशित : चैत्र २६, २०७५ ०७:३१